သြဂုတ်၂၅ ရက်၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့ ဖဆပလ၊စံပြ၊ကန်တော်ကလေး၊ဒဂုံ၊မြောက်ဥက္ကလာပ နှင့်ဗဟန်း
မြို့နယ်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ချက်ချင်းလွှတ်ပေးရန် ဆေးမှုတ်၍တောင်းဆိုသည့် လှုပ်ရှားမှုများ
ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပြည်သူများနှင့်လူငယ်ထုမှလည်း နအဖစစ်အုပ်စုက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အားမတရား
ထောင်ချရန် လုပ်ကြံဇာတ်ခင်း၍ကြိုးစားနေခြင်းကို တတ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းများဖြင့် ကန့်ကွက်ရှုတ်ချသွားကြပါရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါသည်။
On AUG 25th, Generation Wave didagraffiti and spray paint action for the release of Daw Aung San Suu Kyi. Actions happened at key crowded places in Yangon, Burma: PhaSaPaLa, San Pya, Dagon, Bahan & North Oakkalarpa Townships. We also want to encourage people and especially youth of Burma to do all they can to take actions for the release of Daw Aung San Suu Kyi.
Posted by soneseayar at 12:27 AM